စာလုံးပေါင်းမာစတာ - အခမဲ့ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » စာလုံးပေါင်းမာစတာ - အခမဲ့
စာလုံးပေါင်းမာစတာ - အခမဲ့ APK ကို
တစ်ဦးစာလုံးပေါင်းမာစတာတစ်ဦးဖျော်ဖြေမှုများနှင့်စိန်ခေါ်မှုလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေလိမ့်မည်ဟုအားလုံးအသက်အရွယ်အသစ်တစ်ခုပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်းမှကြိုဆိုပါ၏! အဆိုပါဂိမ်း 100% အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်မည်သည့်ခုနှစ်တွင်-App ကို purchases.Spelling မာစတာ7ကွဲပြားခြားနားသောစာလုံးပေါင်းဂိမ်းများနှင့် highscores ဂိမ်းပါရှိသည်, ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့စာလုံးပေါင်းမာစတာသူသည်ကြည့်ဖို့ဂိမ်းရဲ့အဆုံးမှာသင့်ရဲ့ရမှတ်တင်ပြရန်မမေ့မလြော့ပါဆံ့မခံပါဘူး ! သငျသညျအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်နှင့်အတူကစားခြင်းပိုနှစ်သက်လျှင်, တစ်ဦးအလေ့အကျင့် mode ကိုစစ်ဆေး!
highscores များအတွက် Go!
- တစ်ဦးကစကားလုံး2ပုံစံများ - ပြသခံရဖို့တဦးတည်းစကားလုံးများ၏2ပုံစံများ, မှန်ကန်သောတဦးတည်းကိုရွေးပါ!
- စာလုံးပေါင်းမှား Find -4စကားလုံးများကို (3 မှန်ကန်သော + 1 မမှန်ကန်ကြောင်း) ထဲကစာလုံးပေါင်းမှားတစျဦးကိုရှေးခယျြ!
- အမှန်ရှာပါ -4စကားလုံးများကို (3 + 1 မှန်ကန်သောစာလုံးပေါင်းမှား) ထဲကမှန်ကန်သောတဦးတည်းကိုရွေးပါ!
- ဘယ်ဟာပေးစာ .. - screen ပေါ်မှာစကားလုံးသတိရပြီးတော့အနေအထား X ပေါ်မှာတည်ရှိသည်ကြောင်းစာတစ်စောင်ရိုက်ထည့် .. !
- ဆုံးဖြတ် - မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိစကားလုံးမှန်ကန်သောသို့မဟုတ်မမှန်ကန်လျှင်ဆုံးဖြတ်!
- ဆုံးဖြတ် & မှန်ကန်သော - မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိစကားလုံးမှန်ကန်သောသို့မဟုတ်မမှန်ကန်ကြောင်းနှင့်မှန်ကန်သောပုံစံကိုမမှန်ကန်ကြောင်းကိုရွေးချယ်လျှင်လျှင်ဆုံးဖြတ်!
- အကွိမျမြားစှာရှေးခယျြမှု - အမှတ်အသားအားလုံးမှန်ကန်သောစကားများ!
- အလေ့အကျင့် - ခြင်းမရှိကန့်သတ် (အဘယ်သူမျှမဘဝတွေကိုမျှအချိန်ကန့်သတ်) နဲ့ကျပန်းအမျိုးအစား။
အမှတ်ပေး & န့်သတ်ချက်:
- သင့်မှတ်သင့်ရဲ့မြန်နှုန်းအပေါ်မူတည်, ပိုမိုမြန်ဆန်သင်ရအဖြေကိုပိုပြီးမှတ်ရှာတွေ့
- သင်ကအဓိက Menu ထဲမှာကြယ်ပွင့် icon တွေကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အခြားလူများ၏ရမှတ်ပြန်လည်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်
အသက်အရွယ်အဘို့ * ပျော်အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းဂိမ်း
*7ကွဲပြားခြားနားသောစာလုံးပေါင်းဂိမ်း
* တစ်ဦးချင်းစီဂိမ်း mode ကိုအဘို့သင့်ခြုံငုံတိုးတက်မှုများနှင့်စာရင်းဇယားကိုကြည့်ပါ
* ပြည်တွင်း highscores - တစ်ဦးချင်းစီ mode ကိုအဘို့သင့်ကိုအကောင်းဆုံးအချက်တွေကိုသိုလှောင်
* ဂလိုဘယ် highscores - အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအခြားလူများသင်တို့၏ရမှတ်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်အချက်များကိုတင်ပြရန်!
* Facebook, Google + WhatsApp နှင့်အခြားလူမှုရေးကွန်ရက်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ရမှတ်ကိုမျှဝေရန်
အားလုံးစာလုံးပေါင်းပျားပရိတ်သတ်များအတွက် * တစ်ဦးမဖြစ်မနေဂိမ်း
အဘယ်သူမျှမ In-App ကိုဝယ်ယူမှုနဲ့အတူ * 100% အခမဲ့အပြည့်အဝဗားရှင်း
သင်သည်မည်သည့် bug ကိုရှာတွေ့ပါက, ကျွန်တော်တို့ကို littlebigplay@gmail.com မှာသိစေကျေးဇူးပြုပြီးကျနော်တို့က fix ရန်အလွန်ပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မည်!
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/littlebigplay
* သင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရနှင့်အဘိဓါန် Improve
* သင်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ် (အဘယ်သူမျှမဘဝတွေကိုမျှအချိန်ကန့်သတ်) နဲ့စာလုံးပေါင်းလေ့ကျင့်နိုင်သည့်အတွက် PRACTICE mode ကို Added
သင်ကထောကျပံ့ပေးချင်နှင့်ပိုပြီးနှင့်အဓိကအားဖြင့်အခမဲ့ features တွေမြင်ချင်လျှင် * ဂိမ်းဘယ်လောက်ရှိသလဲနဲ့ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
စာလုံးပေါင်းမာစတာ - အခမဲ့
16.64 ကို MB
LittleBigPlay - ကသာအခမဲ့ဂိမ်းများ
Alphabear: စကား ...